Vaovao - tatitra momba ny fanadihadiana manerantany momba ny tsena electrode electrite
Tatitry ny fanadihadiana manerantany momba ny tsena electrode electrode
ny ”tsenan'ny electrode electrite ho an'ny 2027 - fiantraikany covid-19 sy famakafakana manerantany amin'ny karazan-vokatra (hery lehibe, hery avo lenta, herinaratra mahazatra); Fampiharana (lafaoro misy herinaratra, lafaoro misy ladle, ny hafa), ary ny jeografia ”no nampiana tamin'ny fanoloran'ny researchandmarkets.com.
6,564,2 tapitrisa dolara ny sandan'ny tsena tamin'ny taona 2019 ary vinavinaina hahatratra 11 356,4 tapitrisa dolara amintsika amin'ny taona 2027;
Antenaina hitombo amin'ny cagr 9,9% manomboka amin'ny 2020 ka hatramin'ny 2027.
Ny electrode electrite dia singa iray tena ilaina amin'ny famokarana vy amin'ny alàlan'ny fomba lafaoro famokarana herinaratra (eaf). Taorian'ny fihodinana mafy naharitra dimy taona dia nanomboka nirongatra ny fangatahana elektroda grafite tamin'ny taona 2019, miaraka amin'ny famokarana vy. miaraka amin'izao tontolo izao miaro ny tontolo iainana sy mandroso kokoa amin'ny fiarovana, dia miandrandra fitomboana marim-pototra amin'ny famokarana vy ny eaf sy ny fitakiana elektroda grafita manomboka amin'ny taona 2020-2027.
Ny tsena dia tokony hijanona ho tery amin'ny fanampim-pahaizan'ny electrode grafite voafetra.
Amin'izao fotoana izao, ny tsena manerantany dia anjakan'ny faritra Asia Pasifika izay mitaky 58% amin'ny tsena manerantany miaraka. ny filàna avo lenta ho an'ny elektroda grafit avy amin'ireo firenena ireo dia vokatry ny fiakarana avo amin'ny famokarana vy. araka ny asan'ny fikambanana vy eto amin'izao tontolo izao, tamin'ny taona 2018, Sina sy Japon dia samy namokatra vy enina 928,3 sy 104,3 tapitrisa taonina.
Ao amin'ny apac, ny fatana lozisialy mandeha amin'ny herinaratra dia mitaky fangatahana lehibe noho ny fiakaran'ny vy sy ny fitomboan'ny famatsiana angovo herinaratra any Shina. Ny paikadin'ny tsena mitombo ataon'ireo orinasa samihafa ao amin'ny apac dia mamporisika ny fitomboan'ny tsenan'ny elektroda grafit ao amin'ilay faritra.
mpamatsy vy maro any amin'ny faritra amerikana avaratra no tena mifantoka amin'ny fampiasam-bola amin'ny tetikasa famokarana vy. tamin'ny martsa 2019, ireo mpamatsy vy ao aminay - ao anatin'izany ny dynamics vy., us steel corp., ary arcelormittal - dia nanangona vola mitentina 9,7 miliara dolara mba hanamafisana ny fahafahany miatrika ny fangatahan'ny firenena.